Global Voices teny Malagasy » Mozambika : Mitokona Mitaky Karama Ambonimbony Kokoa Ireo Mpiasan’ny Fahasalamana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2013 10:49 GMT 1	 · Mpanoratra @Verdade Newspaper Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Mainty, Mozambika, Fahasalamàna, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka
Francisco J. P. Chuquela , mpiara-miasa amin'ny gazety @Verdade mpikambana ao amin'ny Global Voices any Mozambika no nitatitra ity tantara ity ho an'ny Global Voices
Nitokona nandritra ny folo andro  ny mpiasan'ny fahasalamana mozambikana, nitarika tany amin'ny fiatoan'ny asa atao any amin'ny toeram-pitsaboana maro manerana ny firenena. Ny fisondrotan-karama, ny fampitoviana, ary ny fanamboarana ny saran'ny ao amin'ny sampan-draharahan'ny vonjy aina amin'ny tobim-pitsaboana manerana ny firenena no fototry ny fitakiana ataony amin'ny governemanta.
Efa fitokonana faharoa teo amin'ity sampan-draharaha ity nandritra ny 2013 izao miseho izao, fa saingy ny tamin'ity indray mitoraka ity dia nitatra bebe kokoa tany amin'ireo matianina mpiasan'ny fahasalamana ny hetsi-panoheran'ireo mpitsabo ary efa naharitra roa herinandro izao.
Tonga tamin'ny fara-tampony ny hetsika rehefa nosamborin'ny  mpitandro filaminana i Dr. Jorge Arroz, filohan'ny Associação Médica de Moçambique, ny 26 May 2013 noho ny fanamelohana ho mpanakorontana (famporisihina ny hatezerana na fiokoana amin'ny governemanta). Vokatry ny fanetsehana ny vahoaka niaraka tamin'ny haino aman-jery ary ny fanelanelanan'ireo mpahay lalàna teo anoloan'ny tobin'ny mpitandro filaminana no antony namotsorana an'i Arroz ora vitsy tato aoriana.
Nofintinin'i Tomás Queface, mpianatra iray ao amin'ny sosiolojia, tao amin'ny bilaoginy [pt] Política e Tecnologia ny fametraham-panontaniana avy hatrany nataon'ny Mozambikana tao amin'ny haino aman-jery sosialy mikasika ny ao antony ambadiky ny fisamborana an'i Arroz ary ny fanehoankevitra momba ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny firenena.
Ny alatsinainy maraina 27 May, nivory tao amin'ny Cineteatro Gilberto Mendes, ireo mpiasan'ny fahasalamana mitàna lovia tsy misy na inona na inona eny an-tànany. Sary avy amin'ny Canal Moz.
Ny valintenin'ny governemanta
Heverin'ireo mpandinika fa mampitombo isa ireo mpiasan'ny Fahasalamana mitokona ny nisamborana an'i Arroz. “Tatitry ny  salam-pahavitrihin'ireo mpitokona avy amin'ireo irakiraka : nidina ho dimy isan-jato izany raha 90 isan-jato teo aloha”, notaterin'ny The Stream-n'ny Aljazeera ny 28 May.
Ny 28 May , olon-tsotra iray no nitatitra  hoe nihaona tao amin'ny Hopitaly Be tao Beira ireo mpiasa matianina amin'ny fahasalamana.
Efa miverina amin'ny laoniny avokoa ny toeram-pitsaboana rehetra nandritra ny herinandro voalohany nitokonana hoy ny mpitondra tenin'ny Ministry ny Fahasalamana, ny mponina sy ny mpanao gazety tsy miankina dia nanambara fa nisy faneriterena betsaka tany amin'ny toerana fitsaboana sasany.
Nandefa ny tatitr'izy ireo momba ny zava-misy any amin'ny tobim-pitsaboana sy toeram-pitsaboana maro ny mponina sy ny mpanao gazety ao Maputo : misy fahatarana ny fandraisana ary ny mpianatra, ny mpitsabo miaramila, ny vahiny ary ny vondrona iraisam-pirenena toy ny vokovoko mena no mandray sy mijery ny marary. Ireo matianina hafa, izay manana ny toerana maha-lehibe azy any ivelan'ireo toeram-pitsaboana amin'ny andavanandro, no nanao ireo fitsaboana nilàna fahaizana manokana.
Nanandrana nanetsiketsika ireo mpiasan'ny fahasalamana hiverina miasa ireo talenà tobim-pitsaboana, fa zava-poana izany. Nisy rakipeo nozarain'ny [pt] Fikambanana Medikaly any Mozambika ny 21 May tao amin'ny Facebook izay nilaza fa mandrahona sy mampihorohoro ny mpiasan'ny fahasalamana ny talenà Tobim-pitsaboana lehibe indrindra Mozambikana :
…amin'ny andro izay hampiasàn'ny Ministeran'ny Fahasalamana ny milina [fanerena] izay ao aoriana ao, hitomany ianareo …
Noraràn'ny Polisin'ny Repoblikan'i Mozambika (PRM) sy ny Hery Vonjy Taitra (FIR) tsy hiditra ao amin'ny zaridainan'i Nangade, kianja malalaka ao an-drenivohitr'i Mozambika, izay toeram-pivoriany ny mpiasan'ny fahasalamana ny 22 May teo.
Nobahanan'ny mpitandro filaminana ny fidirana ny zaridainan'i Nangade.
Mitohy ny fitokonana, ahoana ny momba ny fahasalamana ?
Mampanahy ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka satria mbola tsy voavahan'ny Ministeran'ny Fahasalamana ny olan'ny mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy sy ireo mpiasa sasany.
Tao amin'ny toraka bilaogy mivantana noforonin'ny @Verdade mba handraisana ireo tatitra ataon'ny mponina momba ny fitokonan'ny sampan-draharahan'ny fahasalamana, dia nisy fijoroana vavolombelona ny amin'ny fahabangan'ny fahadiovana, ny fanafody, ary ireo filàna fototra hafa. Nisy olona iray nitatitra  tamin'ny SMS ny marainan'ny 28 May :
Numa reunião serviço esta manhã Hospital Central #Maputo  “nao ha roupa,comprensas,anestesico. Assim esta impossivel trabalhar.
Tao amin'ny fotoam-pivoriana tao amin'ny Hopitaly Ben'i #Maputo  io maraina io “tsy misy akanjo, tsy misy fitsaboana fery (pansement), tsy misy fampatoriana (anesthesie). Tsy azo atao ny miasa amin'izany.”
Tsy nahazo fanafody ireo mararin'ny TB tao amin'ny tobim-pitsaboana Malavane ao an-denivohitry ny firenena hatramin'ny nanombohan'ny fitokonana.
Naverin'ny Fikambanana Medikaly any Mozambika sy ny Kaomisionan'ny Mpiasan'ny Fahasalamana fa tsy hijanona ny fitokonana raha tsy atsahatry ny governemanta ny fampihorohoroana ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpiasa hafa nanatevina laharana ny fitakiana, ary mahafa-po ny valin'ny fangatahan'izy ireo. Tsy eken'izy ireo ny fomba nanamboarana ny karamany, satria fanivaivana raki- pifanarahana teo amin'ny fikambanana sy ny governemanta tamin'ny volana Janoary izany.
Nambaran'ny governemanta tamin'ny alalan'ny Tale nasionalin'ny fitantanana mpiasa ao amin'ny Ministeran'ny Asa sy ny Asam-panjakana fa eo amin'ny fetra farany azony atao ry zareo raha resaka fanamboarana ny karama. Ny Ministeran'ny fahasalamana kosa dia miampanga ny fikambanana ho tsy mety misokatra amin'ny resaka.
Fa manana ny dika avy amin'ny taratasy ofisialy nifanakalozan'ny fikambanana tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana ny @ Verdade izay azon'ny tsirairay vakiana, ao anatin'ny taratasy iray tamin'ny 21 May, izay nanambaràn'ny mpiasan'ny fahasalamana ny fahavononany hanohy ny fifampiraharahana, ho valin'ny taratasy avy amin'ny Ministera.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/06/02/48950/
 Francisco J. P. Chuquela: http://twitter.com/chuquela
 Nitokona nandritra ny folo andro: https://globalvoicesonline.org/2013/05/20/mozambique-medical-professionals-announce-strike/
 Associação Médica de Moçambique, : https://www.facebook.com/AssociacaoMedicaDeMocambique?fref=ts
 Nofintinin'i : http://politicaetecnologia23.blogspot.com/2013/05/reaccoes-detencao-de-jorge-arroz-nas.html
 mampitombo isa : http://www.canalmoz.co.mz/hoje/25110-detencao-de-jorge-arroz-aumenta-proporcao-da-greve-dos-profissionais-de-saude.html
 Tatitry ny: http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/130522/mozambique-stands-firm-against-doctor-strike
 olon-tsotra iray no nitatitra: http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/37247-dr-jorge-arroz-foi-detido-e-acusado-sedicao-movimento-popular-forcou-a-sua-libertacao?livedeskitem=45.5
 rakipeo nozarain'ny : http://m.soundcloud.com/user481365941/voice-at-hospital-central?utm_source=soundcloud&utm_campaign=mshare&utm_medium=email&utm_content=http%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser481365941%2Fvoice-at-hospital-central
 fahabangan'ny fahadiovana, : http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/37247-dr-jorge-arroz-foi-detido-e-acusado-sedicao-movimento-popular-forcou-a-sua-libertacao?livedeskitem=37.5
 olona iray nitatitra : https://twitter.com/verdademz/status/339276973211779072